China X6 ngqo ukwenziwa kunye Factory | Itekhnoloji yoNyango esekwe kubungqina e-Hebei
Umpu wobushushu bebunzi (ithemometha ye-infrared) yenzelwe ukulinganisa ubushushu bebunzi lomzimba womntu kwaye ilula kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa. Ukulinganisa ubushushu obuchanekileyo kwimizuzwana e-1, akukho ndawo ye-laser, kuthintela ukonakala kwamehlo, akukho sidingo sokuchukumisa ulusu lomntu, thintela usulelo olunqamlezileyo, umlinganiso wobushushu obukodwa, kunye nokujonga umkhuhlane. Ilungele abasebenzisi basekhaya, iihotele, amathala eencwadi, amashishini amakhulu kunye namaziko, kwaye inokusetyenziswa nasezibhedlele, ezikolweni, kumasiko, kwizikhululo zeenqwelo moya nakwezinye iindawo ezibanzi, kwaye inokusetyenziswa nangabasebenzi bezonyango eziklinikhi.
Ubushushu bomzimba obuqhelekileyo bomzimba womntu buphakathi kwama-36 ukuya kuma-37 ℃ kwi-avareji). Ukuba idlula ku-37.1 ℃, kuthetha ukuba umkhuhlane, 37.3_38 ℃ kuthetha ukuba nomkhuhlane ophantsi, kwaye u-38.1-40 ℃ uthetha umkhuhlane ophezulu. Ngaphezulu kwama-40 ° C, ubomi busemngciphekweni nangaliphi na ixesha.
X6 ngokuthe tye
1. Iindlela ezintathu, isibane esingasemva kunye nemowudi yokulinganisa echanekileyo kukuqaqamba kwale mveliso.
2. Zintathu iindlela zokulinganisa ubushushu emzimbeni womntu, kwinto nangaphakathi.
3. Umboniso wemibala emithathu ekhanyayo icacile kwaye intle.
4. Ubungakanani obungadibaniyo nobushushu buthatha umzuzwana omnye ukulinganisa ngokulula, kwaye iprosesa yeso sensor infrared iqinisekisa ukusebenza ngokukuko kunye nokungabinazimpazamo phezulu nasezantsi ku-0.3 °.
5. Ukubonisa ifonti emnyama kwiscreen esikhulu. I-fuselage yenzelwe ngokuhambelana nokwenziwa ngabantu, isiphatho esigobileyo sonyusa ukubambelela, kwaye iqondo lobushushu liphakathi kwama-32-42 degrees.
6. Umgama wokulinganisa umalunga ne-5CM, owona mgangatho wobushushu ubuncinci ungama-32 degrees kwaye ubuninzi bungama-42 degrees. Impazamo yi-0.3.
1.Umlinganiso wobushushu bomzimba womntu: Linganisa ngokuchanekileyo ubushushu bomzimba womntu, ubeke endaweni ithemometha zemveli zemercury. Abasetyhini abafuna ukuba nabantwana banokusebenzisa iithemomitha ze-infrared (ebunzi iithemomitha) ukujonga ubushushu bomzimba wabo nangaliphi na ixesha, ukurekhoda ubushushu bomzimba ngexesha le-ovulation, ukhethe ixesha elifanelekileyo lokukhulelwa, kunye nokulinganisa iqondo lobushushu ukumisela ukukhulelwa.
Ewe kunjalo, eyona nto ibalulekileyo kukujonga ukuba ngaba kukho nakuphi na ukungaqheleki kubushushu bomzimba wakho nangaliphi na ixesha, ukunqanda ukosuleleka ngumkhuhlane, kunye nokuthintela umkhuhlane wehagu.
2.Ukulinganisa ubushushu besikhumba: linganisa ubushushu bomhlaba kulusu lomntu. Umzekelo, inokusetyenziselwa ukumiliselwa kwakhona kwilungu lomzimba.
3. Ukulinganisa ubushushu bento: linganisa iqondo lobushushu bento, umzekelo, inokusetyenziselwa ukulinganisa ubushushu bomphezulu weti.
4.Ukulinganisa ubushushu bolwelo: linganisa iqondo lobushushu lolwelo, njengobushushu bamanzi okuhlamba wosana. Xa umntwana ehlamba, linganisa iqondo lobushushu lamanzi, ungabe usazikhathaza ngokubanda okanye kushushu; ikwanako ukulinganisa ubushushu bamanzi ebhotileni yobisi ukulungiselela ukulungiswa komgubo wobisi lomntwana;
5. Inokulinganisa ubushushu begumbi
1. Nceda ufunde imiyalelo yokusetyenziswa ngaphambi komlinganiso, kwaye ibunzi kufuneka ligcinwe lomile, kwaye neenwele akufuneki zigubungele ibunzi (nceda wenze umlinganiso kwimeko ye-10 ℃ -40 ℃) ukuqinisekisa ukuchaneka komlinganiso.
2. Ubushushu bebunzi obulinganiswa ngokukhawuleza yile mveliso bubhekisele kuphela kwaye akufuneki busetyenziswe njengesiseko sokugweba ngonyango. Ukuba kukho nabuphi na ubushushu bomzimba obungaqhelekanga obufunyenweyo, nceda usebenzise ithemometha yonyango ukwenza eminye imilinganiselo.
3. Nceda ukhusele i-lens sensing kwaye uyicoce ngexesha. Ukuba iqondo lobushushu elitshintshayo litshintsha kakhulu, kuya kufuneka ubeke isixhobo sokulinganisa kwindawo ofuna ukuyilinganisa kangangemizuzu engama-20, kwaye ulinde ukuba izinze ukuze ikwazi ukumelana nobushushu bendawo ngaphambi kokuyisebenzisa ukufumana ixabiso elichanekileyo.
Okulandelayo: X6 ngwevu
Ubushushu kumpu umpu X5